COVID-19 Health Advisory Announcement - New Level Amber
We would like to inform you of our latest plans related to COVID-19 precaution and actions. The situation is rapidly evolving and the Estate is inastate of readiness to respond promptly to new developments. We have decided in light of the latest actions taken by the regional government, we will increase our state or readiness and alert to Amber.
New Level Amber
A heightened state of alert, with some aspects of previous level still in place.
Good hygiene practice – hand-washing, hand sanitiser, safe coughing / sneezing should be made at all time.
Residents should follow strict social distancing.
Everyone to follow 100% mandatory face mask wearing within the estate.
Oasis will providealimited menu for takeaway and delivery options.
Third-party construction sites have been issued specific guidelines.
We will maintain basic estate management services - waste collection, generator and security.
The Golf Course and tennis courts will remain opened but with limited services to residents and members.
The Country Club, Gym (maximum 8 person) and Oasis Spa (with restrictions) will be opened only to members and residents.
We will postpone all events in the Estate.
Resident registration and ID cards
As one of the preventive measures, the Management encourages all owner-occupiers and tenants to update the family registry by 15th September, 2020. Please refer to the attached file at the end of this announcement. The following information is mandatory and we will be issuing resident ID cards:
Please make sure your driver, helper and nanny are registered as well to your household.
Please also note that owners need to inform the Estate Management office / customer service office whenanew tenant moves in. The new tenants / resident will be required to fill inahealth & travel declaration form before proceeding to occupy the unit.
Landscaping and Housekeeping Service
Our Estate employees will be deployed into teams A & B withazoning work plan to reduce density. This means that landscaping and housekeeping services will be cut down by half starting from Monday, (14th September 2020) until further notice.
The landscaping team will provide services every Monday, Wednesday and Friday. Housekeeping teams will continue to provide services as scheduled.
WHO has provided advice on good practices and what to do in cases of infection and how to prevent infections. Please refer to this link.
Should you require any medical information, please contact Pun Hlaing Siloam Hospital hotline at 013684323.
We must stress that the there is no need to panic. All our preparations are intended to allow us to respond promptly, inatransparent manner, in the event of further escalation of the situation.
Covid-19 နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ကျန်းမာရေးအသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက် - ပယင်းရောင်အဆင့်
လေးစားအပ်ပါသော ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများ ခင်ဗျာ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် COVID-19 နှင့် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မည်ကဲ့သို့သော ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဆိုတာကို အသိပေးကြေညာလိုပါသည်။ ယခု လက်ရှိအချိန်တွင် အခြေအနေများသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ အလျင်မြန်ဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသင့်အနေထားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ နောက်ဆုံးဆောက်ရွက်ချက်များနှင့်အညီ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာကို ပယင်းရောင်အဆင့်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
ပယင်းရောင်အဆင့်သည် အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်သော အဆင့်ဖြစ်ပြီး ယခင်အဆင့်မှ အချို့သော လုပ်ဆောင်သင့်သည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ ဆက်လက်တည်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
လက်ဆေးခြင်း၊ လက်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးနှာချေလျှင် ဖုန်းအုပ်ထားခြင်း အစရှိသည့် ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအနေနှင့် တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေရသည့် စည်းကမ်းကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသွားလာပါက နှာခေါင်းစည်းကို ၁၀၀% ဝတ်ဆင်သွားလာရမည်ဖြစ်သည်။
Oasis Bistro မှ limited menu ကို အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆိုင်တွင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအတွင်းရှိ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော - စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမှု၊ လျှပ်စစ်ပေးဆောင်မှု၊ အစားအသောက် ပို့ဆောင်ပေးမှု၊ လုံခြုံရေး အစရှိသည်တို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းနှင့် တင်းနစ်ကွင်းများကို အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အိမ်ရာအတွင်းနေထိုင်သူများ အတွက်သာ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
Country Club နှင့် Gym ကို အများဆုံး လူ ၈ ယောက်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Oasis Spa ကို ကန့်သတ်ချက်အချို့ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အိမ်ရာအတွင်းနေထိုင်သူများ အတွက်သာ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းပြုလုပ်မည့် ပွဲများအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းမည် ဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ အိမ်ငှားများအနေဖြင့် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်မှတ်ပုံတင်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။ အသိပေးကြေညာစာအဆုံးတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ ပါရှိပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် သက်သေခံကတ်ပြားကို ရရှိရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အိမ်ငှားအသစ်လာရောက်နေထိုင်မှုရှိပါက Estate Management office (သို့မဟုတ်) Customer Service office သို့ အကြောင်းကြားပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ငှားအသစ်၊ နေထိုင်သူအသစ်အနေဖြင့်လည်း အိမ်အသစ်တွင်နေထိုင်ပြောင်းရွှေ့မှုမပြုလုပ်ခင် ကျန်းမာရေးနှင့်ခရီးသွားလာမှုမှတ်တမ်းဖောင်ကို ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းတွင် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုကို လျော့ချရန် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းအားလုံးကို အဖွဲ့ A နှင့် အဖွဲ့ B စသည်ဖြင့် ခွဲခြား၍ လုပ်ကိုင်စေမည်ဖြစ်သဖြင့် ပန်းမန်ဥယျာဥ်အလှဆင်ခြင်း နှင့် အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မှ စတင်၍ နောက်ထပ်ကြေညာမှုမပြုလုပ်ခင်အထိ တဝက်တိတိလျော့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းမန်ဥယျာဥ်အလှဆင်သည့်အဖွဲ့မှာတနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာနေ့များတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့မှာ အချိန်ဇယားအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါပိုးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း link. လင့်ခ်တွင် ဖော်ပြထားသော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။